Dizayina i-imeyili Esebenzelana Namaselula | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 18, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 U-Adam Encane
Zonke izitayela ze-Intanethi zikhomba ekukhuleni okukhulu kokuthi mangaki ama-imeyili afundwa kumadivayisi eselula. Ezinye izibalo zikhombisile ukuthi ama-40% awo wonke ama-imeyili ezinkampani afundwa kuselula. Ezinyangeni eziyisithupha ezidlule, ukufunda i-imeyili kuselula kukhuphuke ngo-6%! Ukubuka ama-imeyili esikrinini esincane kunenkinga nezinzuzo. Amanye amadivayisi asekela i-HTML, ezinye izithombe zilayishwa ngokuzenzakalela, ezinye zinombhalo wokubuka kuqala otholakalayo ngaphambi kokuvula i-imeyili, amanye azokala ngokuzenzakalela ububanzi be-imeyili, futhi iningi lizokala amafonti ukuze afundeke.
I-Litmus inikeze le infographic efundisayo yokuthi ungayisebenzisa kanjani i-imeyili yakho yokwakha idivayisi yeselula. I-infographic ichaza izinto ezibalulekile ekwakheni imiklamo esebenzayo kanye nezingibe ezithinta ukusebenza. Njengoba sisondela esikhathini samaholide, kubalulekile ukubheka lapho abathengisi bethumela ama-imeyili… abaningi ababhalisile bazobe bewafunda njengoba bethenga! Ngabe bazokwazi ukufunda okwakho?
Umthelela Wezemvelo we-SPAM
Jun 9, 2012 ku-2: 52 PM
Lokhu kwenziwe kahle kakhulu, ngiyiphrintile futhi nginayo etafuleni lami futhi ngiyibhekisa kaningi. Ngiyabonga kakhulu ngokukhiqiza lokhu.
Jun 9, 2012 ku-3: 38 PM
Abantu abakhulu ku http://www.litmus.com ufanelwe udumo, uNorma!